Nzira Dzine Dzinobva Semalt Ichatibatsira Simisa Iwe Mazano Kukopa Bots
Kugadzira webhupu simba uye nzira yakakwana yokubudisa deta. Mumaoko akarurama, ichaita kuti kuunganidza uye kuparidzirwa kwemashoko. Zvisinei, mumaoko asina kunaka, zvinogona kutungamirira kumbavha yepamusoro uye kuba kwehuchenjeri uye pamwe nekukwikwidza kusina kururama. Iwe unogona kushandisa nzira dzinotevera kuti uone uye usiye webhusaiti yekutsvaga inoita seinokuvadza kwauri.
1. Shandisa chirongwa chekuongorora:
Chigadziro chekuongorora chichakubatsira kuti uongorore kana webhuti yekutsvaga yakachengeteka yakachengeteka kana kwete - nokian hakkapeliitta. Nechidziro ichi, iwe unogona kuona nyore uye kudzivisa nzvimbo yekuchera bots kuburikidza nekuongorora zvivakwa zvekushanda kwewebhu uye ruzivo rweyo musoro.
2. Shandisa nzira yakaoma-based approach:
3. Tora nzira yekuzvibata:
4. Kushandisa robots.txt:
Tinoshandisa robots.txt kuchengetedza nzvimbo kubva pakutsvaga bots. Zvisinei, chigadziri ichi hachipi kuti zviitike zvingadiwa munguva yakareba. Inoshanda chete apo patinenge tichigadzirisa nekutaridza mabhii akaipa ayo asingagamuchirwi.
Tinofanira kuyeuka mupfungwa kuti kubvisa webhutori hakusi kuipa kana kuipa. Pane dzimwe nguva apo vadzidzisi ve data vanoda kugovana navo sevanhu vakawanda sezvinobvira. Semuenzaniso, nzvimbo dzakasiyana-siyana dzehurumende dzinopa ruzivo rwevanhu vose. Chimwe chiitiko chekutsvaga kwepamutemo zvikwata zve aggregator kana mabhugi akadai sekufambisa kwemawebsite, nzvimbo dzekutsvaira hotele, zvikwata zvekateti yemakonti, uye nzvimbo dzemashoko.